“Bashiir iyo taageerta Illaahay ha garab-galo, shaqo culus oo aad iyo aad u muhiim ah ayay hayaan. Dadka halkan wax ku bartyna waan bogaadinayaa. Haddii ay rabaan inay aqoontooda sii kordhiyaan, wasaaradda Waxbarashadu waxay diyaar u tahay inay taageerto. Xukuumadda Madaxweyne Muuse Biixi hoggaamiyo, waxay mar kasta diyaar u tahay in muhiimadda la siiyo Arrimaha Bulshada. Markaa, iyadoo taa laga duulayo, waxaanu idinkala qayb-qaadan doonnaa horumarinta Xaruntan,” Waxa sidaas yidhi Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Waxbarashada iyo Sayniska Axmed Abokor
“Xarunta Sahan waxay ku jirtaa sannadkii 10aad, waxa soo maray dad ka badan 50-kun qof oo kala kala keenay dalka dibaddiisa iyo gudihiisaba oo ay ku jiraan dad ka yimi dalalka deriska ee Ethiopia, Soomaaliya iyo Jabuuti.
Ugu dambayntii, waxa halkaas shahaadooyin iyo abaal-marinno lagu guddoonsiiyey qaar ka mid ah ardayda cusbitaalka ka najaxday oo halkaas kaga markhaati-kacay waxtarka ay ka heleen Cusbitaalka Sahan iyo hab-dhaqan suubban oo ay kala kulmeen hawl-wadeennada iyo Shaqaalaha Xarunta muddadii ay ku sugnaayeen.
Previous: Wasiirka Waxbarashada oo Hadhimo-sharafeed ah ku maamuusay Xildhibaannada Cusub ee Golaha Wakiillada
Next: Hargeysa: Dad Ka Bogsaday Xanuunnada Dhimirka Oo Ka Qalin-jebiyey Xirfado Lagu Baray Xarunta SAHAN